काठमाडौं- भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी (लिम्पयाधुरा र लिपुलेक पनि) क्षेत्र पारेपछि सुरु भएको नेपाल र भारतबीचको विवादमा चीनले पनि प्रतिक्रिया जनाएको छ। नेपाली भूमि भारतले आफ्नो… बाँकी »
सोलुखुम्बु । माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाका नेपाली कांगे्रसका स्थानीय यूवा नेता दिपक थापाले पार्टी परित्याग गरी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रवेश गरेका छन् । विहिबार नेकपा सोलुखुम्बु जिल्ला माप्य दुधकोशी गाउँपालिका… बाँकी »
पोखरा– बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद बिहीबार पोखरा पुगेका छन् । उनले मोटरबोट चढेर पोखराको फेवातालमा जलविहार पनि गरेका छन् । जलविहार सकेर उनी फेवातालकिनारास्थित फिस्टेल लजमा पुगेका छन्। त्यहाँ… बाँकी »
काठमाण्डौ । सरकार गठन भएको २० महिना पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठनको तयारी गरेका छन् । केहीदिन यता ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित शीर्ष नेताहरुसँगको परामर्शलाई तिव्रता दिनुभएको… बाँकी »
काठमाडौं । प्रचलित नेपालको नक्सा गलत भएकाले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय लगायत नापी विभागलाई विपक्षी बनाउदै दायर रिटमा… बाँकी »
काठमाडौं । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)सोलुखुम्बु जिल्लाअन्तर्गत माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ पार्टी कमिटीको सपथ ग्रहण, प्रशिक्षण तथा प्रथम बैठक सम्पन्न भएको छ । बुधबार पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष… बाँकी »
डा. केसीको नौ दिनदेखि जारी अनसन स्थगित
डा. गोविन्द केसीले नौ दिनदेखि जारी अनसन स्थगित गरेका छन्। ‘राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा देशभरमा जनस्तरबाट आवाज उठिरहँदा उहाँहरुको संवेदनालाई हृदयंगम गर्दै हाल जारी सत्याग्रह तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका… बाँकी »
विजय केसी उर्फ अघोरी बाबा र उनकी पत्नी सारदा पाण्डे प्रहरी फन्दामा
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालमा अघोरी बाबा भनेर चर्चित विजय केसी उनकी पत्नी सारदा पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बाबामाथि ठगी गरेको आरोप लागेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले नियन्त्रणमा लिएको हो… बाँकी »
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका १६ निर्णय, उप–निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन
काठमााडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको उप–निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पछिल्ला मन्त्रिपरिषद्का… बाँकी »
त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयले यात्रुबाट जफत गरेका ६ हजार ८ सय १७ बोतल रक्सी एकैपटक लिलाम बिक्रि गर्ने भएको छ । यसै साता निकालिएको सूचनाअनुसार इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले दुई… बाँकी »
1 / 42112345678910Next »